သူများနှင့်မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဂျပန်ခရစ်စမတ် Big Event | Working Friends
သူများနှင့်မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဂျပန်ခရစ်စမတ် Big Event
2017年12月25日 2018年9月21日 EM
ဂျပန်ခရစ်စမတ် Big Event
။နှစ်ကုန်ပိုင်းလည်းဖြစ်တော့ ခရစ်စမတ်၊နှစ်သစ်ကူးအချိန်နဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်ကာလပေါ့။
အချိန်ကာလအားဖြင့် ၂၄ရက်ည ပိုင်းမှ ၂၅ရက်အထိ။
ခရစ်စမတ်သစ်ပင် အလှဆင်၊ အရသာရှိတဲ့ ကြက်ကင်စားပြီး၊ လက်ဆောင်ပေးပို့။^^
၂၄ညမှာဆိုရင် ခရစ်စမတ်ကိတ်မုန့် ၊ ကြက်ကြော် (fried chicken, roasted chicken) စားလေ့ရှိကြတယ်။
အယ် ကြက်ကြော်၊ကြက်ကင်????? ဘာဆိုင်လဲ လို့ တွေးသူများအတွက် လင်းပါရစေ။
ဂျပန်မှာတော့ ခရစ်စမတ်ဆို ကိတ်မုန့်နှင့် ကြက်ကြော်က မပါမဖြစ် ။
စူပါမားကတ်တွေမှာဆိုရင်လည်း ၂၄ရက်ကစပြီး၊ ကြက်ကြော်၊ကိတ်မုန့် အပီအပြင် ရောင်းပြီ။
အဓိက ရောင်းချတာက KFC ! သားသားမီးမီးကြိုက်ကြိုက်မဟုတ်လား။
၁၁လပိုင်းလောက်ကတည်းက ဂျပန် KFC ကန်တကီးမှ ကြော်ငြာအစီအစဉ်စပါပြီ။ နှစ်စဉ် စိတ်ဝင်စားစရာပုံစံနှင့် ခရစ်စမတ်ကြက်ကင်လောကကို လွှမ်းခြုံထားတာပေါ့နော်။
နှစ်စဉ်ကြော်ငြာလေး ကြည့်ကြည့် youtube မှာ ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။
ခရစ်စမတ်ကို ဘာသာရေးပွဲဆိုတာထက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအနေနှင့် ဆင်နွှဲကြတာပေါ့။
ဒီဇင်ဘာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ တစ်မြို့လုံးတစ်နယ်လုံး ခရစ်စမတ်အထိအတွေ့ အရသာများလွှမ်းခြုံလို့ပဲ။
ဘူတာတိုင်းလိုလို ခရစ်စမတ်ကြော်ငြာများ၊ ကုန်တိုက်များကလည်း အားကျမခံ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်၊ ဈေးဆိုင်ခန်းလေးများကလည်း ခရစ်စမတ်ကံစမ်းမဲ စတာတွေနဲ့ စည်ကားလို့ပေါ့။
ကျွန်မတောင်မှ ခရစ်စမတ်ကံစမ်းမဲ ပေါက်ပါသေးတယ်။ဈေးဝယ်ကဒ်ကူပွန်ပေါ့။ ကုန်တိုက်မှာ ဝယ်စရာရှိတာနဲ့ အတော်ပဲ ^^
နောက်ပြီး၊ ရိုမန့်ဆန်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလို့ပဲပြောရမလား။သမီးရည်းစားတိုင်းရဲ့ ရိုမန့်အချိန်လို့ပြောရပါမယ်။
အတွဲတိုင်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အလှဆင်ထားမှု၊ ကုန်တိုက်များရဲ့ အစီအစဉ် ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်း စတာတွေပေါ့။မိသားစုနှင့် အတူရှိတာထက် ချစ်သူရည်းစားနှင့် လျှောက်လည်တာများပါတယ်။ လည်စရာကတော့ အလှမီးပြနေရာ illumination၊ စကိတ်ကွင်း၊ရှော့ပင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထားပါ။ ဂျပန်မှာက ဘာသာရေးပွဲတော်ထက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ဖြစ်နေတာကိုး။
ကလေးငယ်ရှိတဲ့ အိမ်တွေကတော့ ကလေးအတွက် ခရစ်စမတ်လက်ဆောင် ပြင်ဆင်ပေးကြပါတယ်။
ဆန်တာက ပေးတဲ့လက်ဆောင်အနေနှင့် ကလေးအိပ်နေတုန်းမှာ အိပ်ရာဘေးထားထားတာ၊
မနက်ရောက်တော့ လက်ဆောင်လေးနဲ့ ပျော်ပြီလေ။
အဲ့တော့ ဂျပန်က ခရစ်စမတ်က ထူးဆန်းစရာတွေအများကြီးပါနော်။
အနောက်နိုင်ငံတွေက ခရစ်စမတ်နှင့် ဂျပန်ခရစ်စမတ် ဘာတွေကွာမလဲ။
(၁)ခရစ်စမတ်နေ့ထက် ခရစ်စမတ် Eve ၂၄ရက်နေ့က အဓိက
(၂)strawberry short cake ဆန်တာပုံလေးတင်ထားတဲ့ ခရစ်စမတ်ကိတ် စားတယ်
(၃) KFC chicken စားတယ်
(၄) သမီးရည်းစား နှစ်ယောက်တည်း ဆင်နွှဲ
(၅) လက်ဆောင်ဆို နည်းနည်းပဲ ရတယ်(ပိုမပေးဘူး ^^) တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းပေးတတ်တယ်။
(၆) ခရစ်စမတ်နေ့ လည်း ဆိုင်ဖွင့်
(၇) ၂၆ရက် ရောက်တာနဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင် စတာတွေကို သိမ်းဆည်း(နှစ်သစ်ကူးအတွက် ဂျပန်ရိုးရာပုံစံ အလှဆင်)
(၁) ခရစ်စမတ်နေ့ ၂၅ရက်က အဓိက
(၂)ကွတ်ကီး၊butter cake ရိုးရိုးကိတ်
(၃) အသားပေါင်ခြောက်၊ အမဲသား၊ ကြက်ဆင်သား (တစ်ချို့ ငါးဟင်း)
(၄) မိသားစု၊ဆွေမျိုးနှင့်အတူ လူအများနှင့် ဆင်နွှဲ
(၅) လက်ဆောင်ဆိုရင် ကြိုက်သလောက်ပေး၊ ခရစ်စမတ်ပါတီပွဲမှာ လက်ဆောင်ပေးကြတယ်။
(၆) ဆိုင်တိုင်းလိုလို ပိတ်
(၇) နှစ်သစ်အထိ အလှဆင်ထား
စသဖြင့် မတူညီ ကွဲပြားချက်တွေ အများကြီးပါနော်။
နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု မတူညီရာကနေ စသလားပဲ။
သူငယ်ချင်းတို့လည်း ခရစ်စမတ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဂပြနျခရဈစမတျ Big Event
နှဈကုနျပိုငျးလညျးဖွဈတော့ ခရဈစမတျ၊နှဈသဈကူးအခြိနျနဲ့ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ အခြိနျကာလပေါ့။
အခြိနျကာလအားဖွငျ့ ၂၄ရကျည ပိုငျးမှ ၂၅ရကျအထိ။
ခရဈစမတျသဈပငျ အလှဆငျ၊ အရသာရှိတဲ့ ကွကျကငျစားပွီး၊ လကျဆောငျပေးပို့။^^
၂၄ညမှာဆိုရငျ ခရဈစမတျကိတျမုနျ့ ၊ ကွကျကွျော (fried chicken, roasted chicken) စားလရှေိ့ကွတယျ။
အယျ ကွကျကွျော၊ကွကျကငျ????? ဘာဆိုငျလဲ လို့ တှေးသူမြားအတှကျ လငျးပါရစေ။
ဂပြနျမှာတော့ ခရဈစမတျဆို ကိတျမုနျ့နှငျ့ ကွကျကွျောက မပါမဖွဈ ။
စူပါမားကတျတှမှောဆိုရငျလညျး ၂၄ရကျကစပွီး၊ ကွကျကွျော၊ကိတျမုနျ့ အပီအပွငျ ရောငျးပွီ။
အဓိက ရောငျးခတြာက KFC ! သားသားမီးမီးကွိုကျကွိုကျမဟုတျလား။
၁၁လပိုငျးလောကျကတညျးက ဂပြနျ KFC ကနျတကီးမှ ကွျောငွာအစီအစဉျစပါပွီ။
နှဈစဉျ စိတျဝငျစားစရာပုံစံနှငျ့ ခရဈစမတျကွကျကငျလောကကို လှမျးခွုံထားတာပေါ့နျော။
နှဈစဉျကွျောငွာလေး ကွညျ့ကွညျ့ youtube မှာ ရှာကွညျ့လို့ရပါတယျ။
ခရဈစမတျကို ဘာသာရေးပှဲဆိုတာထကျ ပြျောပှဲရှငျပှဲအနနှေငျ့ ဆငျနှဲကွတာပေါ့။
ဒီဇငျဘာရောကျပွီဆိုတာနဲ့ တဈမွို့လုံးတဈနယျလုံး ခရဈစမတျအထိအတှေ့ အရသာမြားလှမျးခွုံလို့ပဲ။
ဘူတာတိုငျးလိုလို ခရဈစမတျကွျောငွာမြား၊ ကုနျတိုကျမြားကလညျး အားကမြခံ ခရဈစမတျသဈပငျ၊ စြေးဆိုငျခနျးလေးမြားကလညျး ခရဈစမတျကံစမျးမဲ စတာတှနေဲ့ စညျကားလို့ပေါ့။
ကြှနျမတောငျမှ ခရဈစမတျကံစမျးမဲ ပေါကျပါသေးတယျ။စြေးဝယျကဒျကူပှနျပေါ့။
ကုနျတိုကျမှာ ဝယျစရာရှိတာနဲ့ အတျောပဲ ^^
နောကျပွီး၊ ရိုမနျ့ဆနျတဲ့အခြိနျကာလတဈခုလို့ပဲပွောရမလား။သမီးရညျးစားတိုငျးရဲ့ ရိုမနျ့အခြိနျလို့ပွောရပါမယျ။
အတှဲတိုငျး ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားဖှယျ အလှဆငျထားမှု၊ ကုနျတိုကျမြားရဲ့ အစီအစဉျ ၊ လကျဆောငျပစ်စညျး စတာတှပေေါ့။
မိသားစုနှငျ့ အတူရှိတာထကျ ခဈြသူရညျးစားနှငျ့ လြှောကျလညျတာမြားပါတယျ။
လညျစရာကတော့ အလှမီးပွနရော illumination၊ စကိတျကှငျး၊ရှော့ပငျး တှပေဲဖွဈပါတယျ။
ထားပါ။ ဂပြနျမှာက ဘာသာရေးပှဲတျောထကျ ပြျောပှဲရှငျပှဲ ဖွဈနတောကိုး။
ကလေးငယျရှိတဲ့ အိမျတှကေတော့ ကလေးအတှကျ ခရဈစမတျလကျဆောငျ ပွငျဆငျပေးကွပါတယျ။
ဆနျတာက ပေးတဲ့လကျဆောငျအနနှေငျ့ ကလေးအိပျနတေုနျးမှာ အိပျရာဘေးထားထားတာ၊ မနကျရောကျတော့ လကျဆောငျလေးနဲ့ ပြျောပွီလေ။
အဲ့တော့ ဂပြနျက ခရဈစမတျက ထူးဆနျးစရာတှအေမြားကွီးပါနျော။
အနောကျနိုငျငံတှကေ ခရဈစမတျနှငျ့ ဂပြနျခရဈစမတျ ဘာတှကှောမလဲ။
(၁)ခရဈစမတျနထေ့ကျ ခရဈစမတျ Eve ၂၄ရကျနကေ့ အဓိက
(၂)strawberry short cake ဆနျတာပုံလေးတငျထားတဲ့ ခရဈစမတျကိတျ စားတယျ
(၃) KFC chicken စားတယျ
(၄) သမီးရညျးစား နှဈယောကျတညျး ဆငျနှဲ
(၅) လကျဆောငျဆို နညျးနညျးပဲ ရတယျ(ပိုမပေးဘူး ^^) တနျဖိုးကွီးပစ်စညျးပေးတတျတယျ။
(၆) ခရဈစမတျနေ့ လညျး ဆိုငျဖှငျ့
(၇) ၂၆ရကျ ရောကျတာနဲ့ ခရဈစမတျသဈပငျ စတာတှကေို သိမျးဆညျး(နှဈသဈကူးအတှကျ ဂပြနျရိုးရာပုံစံ အလှဆငျ)
(၁) ခရဈစမတျနေ့ ၂၅ရကျက အဓိက
(၂)ကှတျကီး၊butter cake ရိုးရိုးကိတျ
(၃) အသားပေါငျခွောကျ၊ အမဲသား၊ ကွကျဆငျသား (တဈခြို့ ငါးဟငျး)
(၄) မိသားစု၊ဆှမြေိုးနှငျ့အတူ လူအမြားနှငျ့ ဆငျနှဲ
(၅) လကျဆောငျဆိုရငျ ကွိုကျသလောကျပေး၊ ခရဈစမတျပါတီပှဲမှာ လကျဆောငျပေးကွတယျ။
(၆) ဆိုငျတိုငျးလိုလို ပိတျ
(၇) နှဈသဈအထိ အလှဆငျထား
စသဖွငျ့ မတူညီ ကှဲပွားခကျြတှေ အမြားကွီးပါနျော။
နိုငျငံယဉျကြေးမှု မတူညီရာကနေ စသလားပဲ။
သူငယျခငျြးတို့လညျး ခရဈစမတျမှာ ပြျောရှငျပါစေ။
Japanese CultureJP Life
Previous Previous post: ※Interview※ ရှင်သန်ခြင်း အနုပညာ_ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ရင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုက အရေးကြီးဆုံး！ဒီလိုလေးတွေ ပြင်ဆင်မယ်
Next Next post: မြန်မာမှ ဂျပန်သို့ ထရိန်နင် အလုပ် လာလုပ်ချင်ရာဝယ်… Technical Intern Training